Ngisho ezinye eminyakeni embalwa edlule ukuze uthole lokhu noma lolo lwazi kwakudingekile ukuba ahlale izinsuku eside wezincwadi, engcwaba ikhanda lakhe "encwadini mbhoshongo." Namuhla, kulula kakhulu ukuthola ukunakwa elilodwa noma kwenye isiqondiso ngokusebenzisa ithelevishini ne-Internet. Esikhundleni izincwadi ezikhethekile weza tinhlelo kanye sici amafilimu, "Bi-Bi-Si." Futhi uhlu BBC amafilimu likhulu kangangokuthi iqukethe iziqephu acacile kakhulu umsuka emhlabeni phansi, okwembula izimfihlo nakwezinye izizwe, kukhona izifundo zomlando, bemivubukulo nokuma kwezwe. Sikunikeza lakhetsiwe enemisebenzi movie.
Amamuvi ku-BBC izilwane zasendle
Ngobutjha ithelevishini movie "Bi-Bi-Si", ungathola eziningi izindaba ezinhle futhi bezijabulisa ekubhekaneni izilwane zasendle. Ngokwesibonelo, ukunakekelwa okukhethekile kufanele kukhokhelwe eziyisithupha-ingxenye ifilimu "Izimfihlo Pacific", abadalwanga ngentshiseko Discovery Channel. Yilokho, sanquma ukwenza kuqala ohlwini lwethu BBC amafilimu kuzo zonke izinhlobo.
Uchungechunge lokuqala - "Ocean Isles"
Emfanekisweni wokuqala uchungechunge ngokuthi "iziqhingi Ocean" zalesi documentary ukhuluma ngani naseziqhingini eziqhelile nezilwane iwe kubo ukuthi. Lapha uzothola umhlangano ongenakulibaleka nge ekujuleni amahle okuyimfihlakalo kolwandle, lapho ungabona zilwane zangaphansi kwamanzi zibe imininingwane, funda izimfihlo okuvela zasezindaweni kanye neziphepho, ukufunda imicikilisho ezizweni ezazakhelene nawo ezazihlala, ukuze bathathe uhambo ukudoba ngisho ukubona ngezicathulo ku ezingosini ze kusukela amanzi.
Esikhathini uchungechunge lwesibili, futhi kufakwe ohlwini lwethu BBC izilwane zasendle ifilimu ngokuthi "zifiki", zonke izindawo engavamile futhi iziqhingi zasePacific Ocean zichazwe ngokuningiliziwe. Ngokwesibonelo, lapha ungabona omunye isiqhingi esikhulu kunazo zonke ezishisayo emhlabeni - Guinea Funa - lapho - 300 zezilwane ezincelisayo, ezihuquzelayo, izinambuzane nezinyoni. Kukhona okuningi ulwazi mayelana nezinye iziqhingi ezikude kakhulu futhi kancane-eyaziwa olwandle, kukhona izithombe ezikhanyayo izinambuzane ezingavamile, izitshalo nezilwane.
Uchungechunge eyesithathu lesithupha
Uchungechunge lwesithathu ngokuthi "Endless blue", lisho omkhulu ushaka silo, ezinamagobolondo amancane, kanye nalabo abanukubeza izingane akanazwela futhi izisulu zabo, siphila esiphelweni expanses enkulukazi olwandle.
Esikhathini uchungechunge wesine ( "Ocean Lezintaba-mlilo") utshela emangalisayo mlilo beziQhingi zasePacific. Ngo okwesihlanu ( "Kuyaxaka Isiqhingi") isitshela indaba yamakhono engavamile kwezilwane eziphoqelelwa ukuzivumelanisa ezweni lanamuhla. Futhi ekugcineni, ingxenye yesithupha ochungechungeni afakwe ohlwini BBC amafilimu kuzo zonke izinhlobo, ngokusho ezisengozini yokuqothulwa zezilwane, izitshalo, izinyoni nezinhlanzi.
I tinhlelo enembako BBC ngezinyoni
Phakathi BBC documentary amafilimu zingatholakala namafilimu esifushane, okusikhumbuza ngaphezulu isiqophi amateur yangempela serialized TV, abadlali ukuthi zingokoqobo eziphilayo nezidalwa. Ngokwesibonelo, afana amafilimu serial zihlanganisa uchungechunge "The Life of Birds", yakhishwa ngo-1998. Kuyo kukhona owaziwa isazi, isihambi, intatheli kanye umethuli uDavid Attenborough. Lokho uye amabanga amade emhlabeni wonke, ukuhlola umsuka kanye nezimo zemvelo zokuphila zalezi mansions emangalisayo ezinamaphiko iplanethi yethu.
Ikakhulu, i-yamalunga lokuqala zezinyoni, mayelana yazo, ukuziphatha kanye kusinda indlela etshela BBC amafilimu. Uhlu "Amadokhumentari ngemvelo" lingahunyushwa nangokuthi kulekelelwa kalula nge esiyingqayizivele mini-uchungechunge "Life efrijini."
Le filimu serial ukhona , uDavid Attenborough, usitshela izinyoni kanye nezinye izakhamuzi zaseMpumalanga nezwekazi ongaqondakali emhlabeni - Antarctica. Lapho ebukele le movie uzofunda zasolwandle izinyoni izinhlanzi yokudla, kanye ukubona izinhlobo ezimbalwa penguin - hhayi flying, kodwa abamele bezijabulisa kakhulu umndeni wezinyoni.
VVS Amafilimu (uhlu) documentary izilwane
Abathandwayo BBC documentary movie movies ngezilwane. Ngokwesibonelo, ngo-2013 inkampani ikhishwe omunye ethandwa kakhulu ifilimu izinguqulo ngefomethi ngokuthi "Norway izilwane zasendle." Le filimu-movie ulinde wena umhlangano ongenakulibaleka nge uhlobo kumangaza futhi eyingqayizivele Norway. Lapha ungabona izimpophoma ngokubabazekayo futhi giant futhi engajwayelekile ngale amawa, sizungezwe yamadwala nasemigodini yamanzi, vakashela emahlathini ukuze ezinkulu amaphiva, izinyamazane, izingwejeje, amabhere, izimpungushe, izimpisi, izinyamazane kanye lynx yase ekhaya.
Ngaphezu kwalokho, uhlu Air Force ngezilwane futhi kumele ifake phakathi ezine-okuyingxenye ifilimu iqhaza ehola Chris Pekhema movie ngokuthi "Isimangaliso emhlabeni isilwane." Uchungechunge wakhululwa ngo-2014 futhi uye sebevele ukuba ngilidlulisele izigidi kubabukeli bomhlaba wonke. Lokhu akusona isimanga, ngoba kule mini-chungechunge wavusa nezindaba main ezihlobene ukubukeka izilwane lokuqala, ukuziphendukela kwaso futhi izici ukuzivumelanisa ezweni lanamuhla. Ikakhulukazi, ifilimu Liphendula imibuzo ebaluleke kakhulu uchungechunge "Kungani ngokwemvelo ixoxo nexoxo liyazigxumela?"
Uhlu tinhlelo ngezilwane, ungase futhi wenze ama-movie alandelayo:
"Iplanethi EwuMhlaba. Kusukela isigxobo ukuze isigxobo ";
"Iplanethi enguMhlaba: Ugwadule";
"Iplanethi EwuMhlaba. Intaba ";
"Dinosaur Planet" nabanye.
Ama-Movie Air Force amathuba esasijabulisa izilwane
Ukuqhubeka ukukhetha amabhayisikobho best of the Air Force, uhlu lingasetshenziswa eyayihambisana amafilimu ngamakhono kwezilwane okungavamile. Kwabe sekuvela ukuthi, hhayi kuphela abantu bathambekele ukuthuthukisa izici angajwayelekile.
In the movie onesihloko esithi "amabutho Ezingabonwayo bemvelo: amakhono angaphezu kwawemvelo kwezilwane" imayelana edume kunazo isilwane izangoma. Ngokwesibonelo, uzofunda kwenzeka kanjani ukukhulumisana telepathic phakathi izindlovu, sise 50 km ibanga; kungani izibankwa bayakwazi ukusebenzisa phezu kwamanzi; njengoba oshaka ukubona kagesi izinto ensimini; kanjani ukuze uthole ulwazi mayelana nezwe emhlabeni amahlengethwa.
Ngaphezu kwalokho, uhlu BBC ifilimu mayelana odumile emlandweni kanye nemicimbi, silayishe ngokuphepha ifilimu zemfundo "Le mpi enkulu kaKhesari." Isenzo amafilimu kuthatha umbukeli kuya kude '52 BC. e. Kwakuphakathi nalesi sikhathi impi enkulu kakhulu yonke iYurophu kwakufanele athathe indawo, futhi okwakufanele Yuliy Tsezar. Ngokwe abalobi, umqondo encane mini-chungechunge ukuchaza uhlamvu nobuntu imithetho yombusi. Ngaphezu kwalokho, lo ifilimu yayisekelwe izenzakalo zomlando yangempela.
amafilimu abathandwayo yezesayensi nasezinzuzweni zemfundo mayelana izinambuzane
Ngaphezu amabhayisikobho ngezilwane, BBC has a lot of mini-uchungechunge elihlobene ne olusithekile emhlabeni womuntu izinambuzane. Ngokwesibonelo, kungase kwenziwe isibaluli lokhu ifilimu "Intuthwane Empire." Kuyo sikhuluma idolobha miniature, okuyinto libuswa intuthwane indlovukazi. Ayikho ngaphansi zikhanga izinguqulo nezinye lenkampani ifilimu, isibonelo, "Mikrosafari. Journey ezweni of izinambuzane "," Microcosm: izakhamuzi utshani "nabanye.
Yini ama-movie BBC babatshela ukuthini abantu?
Uhlu akhona Air Force lomuntu kufanele ufake uchungechunge multi-ifilimu, ehlanganisa zonyaka eziningana, "umzimba womuntu". Kulesi movie documentary ifilimu utshela mayelana nezwe elithakazelisayo kokuvamile, etholakala ngaphakathi emzimbeni womuntu. Ngokwesibonelo, it is ngokusobala wawubonisa yi zavela kancane kancane lomuntu oyedwa olungelo kusukela ekuzalweni kwakhe kuze kube ukuguga nemiphumela ebuhlungu yokufa.
Isici esiyinhloko yochungechunge yikhono ukugcina umzimba womuntu emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukukhula kwawo kusuka ngaphakathi.
Uhlu Air Force abantu, ungakwazi ukwengeza ama-movie futhi bezijabulisa ifilimu "The Sandman. Lapho ingqondo uzicabangela wena. " Lesi sithombe ezinyakazayo kungokwalabo uchungechunge ethandwa isayensi ifilimu futhi utshela indaba obuntu amakhono ubuchopho ngesikhathi sokulala futhi sihlale siphapheme.
Ejabulisayo kungabuye ngokuthi ifilimu "usuku lokufa kwami. Ukutadisha sebefile. " Le filimu-movie lembula ulwazi mayelana nokuthi kwenzekani emzimbeni womuntu ngesikhathi ukuqala sebefile. Funda okuningi mayelana izinzwa womuntu (obonayo, ukuhogela) kungaba kusukela movie "imizwa yomuntu." Thola ulwazi mayelana izindlela zokuziphilisa izimo ezimbi kakhulu kungenzeka kusukela ifilimu "Terre des Hommes". Yini ebaluleke kokubona BBC zomlando? Uhlu yamaprojekthi mini-chungechunge namafilimu njengembuyiselo sizonikela kuwe ngezansi. Manje sinikeza uhlu amabhayisikobho ezithakazelisayo kakhulu lomuntu:
"Kungani abantu mncane ungatholi amanoni" nabanye.
Yeka indlela okuthakazelisa ngayo amafilimu zomlando kusukela BBC?
Ngaphezu ukujabulisa amafilimu ngemvelo, inkampani "Bi-Bi-Cu" Sekuyisikhathi eside wasebenza phezu kwendalo amabhayisikobho zomlando. Ngokwesibonelo, phakathi kwalezi tinhlelo zingatholakala ukuthusa movie letibitwa ngekutsi "uVespasian:. Umuntu agciniwe eRoma"
Premiere amafilimu senzeka ngo-2011. Utshele mayelana umbusi abadumile wasendulo wamaRoma, ngubani empeleni wawungenawo amandla ikakhulukazi induna, kodwa wayesaziwa ngokuthi okuhle esimweni umbusi no ohlakaniphile. Lokho wakwazi ukuqeda izingxabano, ukuthuthukisa ukuhweba futhi ukwandisa kakhulu nesimo esingokwezimali wonke uMbuso WaseRoma.
Nasibuka mlando BBC amafilimu uhlu the best amafilimu kungenzeka ukwengeza movie "The Lost Impucuko ePeru." Libhekisela ucwaningo samanje wemiphakathi ephucuke endala emhlabeni - esizweni Moche, ahlala ezwekazini lase-South America eside ngaphambi Columbus. Ngokusho okutholakele zomlando eziningi, abameleli isizwe uyasala izakhiwo ezahlukene ezingaphezu kwama-60 zenkolo, kuhlanganise Pyramids weLanga futhi the Moon.
Izimfihlo Ancient Egypt kungenziwa landiswa kanye movie "Ancient Egypt. ukutholakala Omkhulu "kusukela uchungechunge" Mysteries. " Le filimu-movie elikushoyo umakhi ezidumile isekisi Giovanni Beltsioni owathola imfihlo yokungcwaba ethuneni Ramzesa Velikogo.
Ngena ku-esidlule bese uvakashela umuzi odume wasendulo wamaRoma yasePompeii, wangcwatshwa ngaphansi ungqimba obukhulu umlotha can nge ifilimu "I Ngokuphila Nokufa e yasePompeii naseHerculaneum" noma ifilimu "Izinsuku Zokugcina yasePompeii." Futhi kuwufanele bebona documentary serial mini-uchungechunge oluthi "Raid Omkhulu ngeMpi Yezwe II" futhi "eRoma. Izimfihlo zazifihlwa ngaphansi emhlabathini. " Namanje sincoma ukuthi ubona amafilimu elandelayo ohlwini:
"Izimfihlo Knights Templar."
"LukaNowa Ark - The Real Story."
"LamaGladiator kweMpi Yezwe II."
"Amakhosi Queens" nabanye.
Yini ama-movie incoma ukuthi Air Force?
Ngaphezu emadokhumenthari, wena banethuba eliyingqayizivele ukubona acacile kakhulu futhi ongasoze BBC sici amafilimu. Uhlu lezi amafilimu silethe ukunakwa kwakho. Ngokwesibonelo, kulolu hlu sifake idrama enhle inhliziyo ngo-2009 ngokuthi "Bright Star." Lena indaba edabukisayo ekuphileni odumile e-England imbongi Dzhona Kitsa, ubani wafa ngokuzumayo eneminyaka engu-engu-25. Likhuluma indaba mayelana ubuhlobo evulekile romantic phakathi John abasha yakhe ayithandayo Fenni Braun.
Azinake nemdlalo "U-Emma" ngo-2009, eyakhelwe le noveli yodumo eponymous ngu Dzheyn Ostin. Likhuluma indaba intokazi enhle, ehlakaniphile futhi onethonya ngubani isithukuthezi Unquma ukuzama ngendima wabantu futhi uthole ilungelo uvumelane abangane bakhe kancane ngempumelelo. Nokho, njengoba kuvela, akusiyo zonke ecacile ekuphileni kwakhe siqu ...
Melodrama kusukela BBC
Thanda izinyembezi athinta inhliziyo kwezobuciko BBC movie? Uhlu (melodrama) kuyinto of mafilimu ukhuthaze ukuthi udlulise amehlo. Ngokwesibonelo, siye kuhlanganisiwe ke esihle melodrama "Ukuthonya", 2007, lapho kuyinto yokuqala lithathelwe noveli Dzheyn Ostin. Kuyo ngeke bajwayelane lady enhle, wazibonela bonke ubunzima ukudalelwa, futhi ukwazi yonke butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ubudlelwano phakathi indoda nowesifazane.
Fans of zomlando zothando bayojabulela version ifilimu ka "Dzheyn Eyr" ngo-2006, esekelwe umsebenzi Sharlotty Brontë. Luphinde ezithakazelisayo ukubona melodrama ezilandelayo:
"Ngaphansi eGreenwood Tree".
"Sense futhi ukuzwa."
"The Other Boleyn Girl" nabanye.
Ngo iningi la amadrama kanye Awama-Melodrama, ungakwazi ukujabulela umdlalo olukhulu abalingisi, ukuvota kwenkundla namaqiniso futhi ubuhle izingubo nezinye izinsimbi.
Ngelilodwa nje, ubuka uhlu lwethu ehlongozwayo Lasemoyeni, bakhethe ukubheka nje labo amabhayisikobho kanye TV ukuthi umxhwele kakhulu okwamanje. Futhi uma ufuna, ukwenza uhlu amabhayisikobho engcono kusukela "Bi-Bi-Si" bese wabelana nathi.